Jesu pamahombekombe erwizi, Mweya Mutsvene seNjiva, neNzwi kubva Kudenga -- ITiriniti here?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Jesu pamahombekombe erwizi, Mweya Mutsvene seNjiva, neNzwi kubva Kudenga -- ITiriniti here?
Jesu pamahombekombe erwizi, Mweya Mutsvene seNjiva, neNzwi kubva Kudenga -- ITiriniti here?
MATEO 3:16 Jesu wakati abapatidzwa, pakarepo wakabuda mumvura; zvino, tarira, denga rakamuzarurirwa, akavona Mweya waMwari achiburuka senjiva, akavuya pamusoro pake.
17 Zvino tarira, inzwi rakabva kudenga, richiti: uyu ndiye Mwanakomana wangu unodikanwa, wandinofarira!
Ndiyani akataura akati, “Uyu ndiye Mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira? Anofanira kuva Mwari Baba.
Baba vemwana ndiye murume anoisa mbeu yehupenyu (hurume hwababa) mumimba maamai. Mukadzi chete ndiye anokwanisa kukudza muviri wakaputira mbeu iyi kusvikira mwana akakwana azvarwa.
Maria ndiye aive mai. Ndiyani akaisa Mbeu yeHupenyu husingaperi mumimba make?
Bhaibheri rinoti waive Mweya Mutsvene.
MATEO 1:20 Zvino wakati acharangarira izvozvo, tarira, mutumwa waShe akazviratidza kwaari pakurota, akati: Josefa, mwanakomana waDavidi, usatya kutora Maria, mukadzi wako; nokuti chakagamuchidzwa mukati make ndechoMweya Mutsvene.
MATEO 1:18 Kuberekwa kwaJesu Kristu kwaive kudai: Maria, mai vake, wakati anyengwa naJosefa, vasati vasongana, wakavonekwa wava nemimba noMweya Mutsvene.
Saka Mweya Mutsvene unofanira kuva Baba vaJesu!
Saka Mweya Mutsvene ndiwo Mwari Baba.
Saka Mweya Mutsvene wakataura pawaiburuka seNjiva uchigara pana Jesu.
Saka zvakuratidzika sepaive paita vanhu vaviri.
Jesu naMweya Mutsvene. Asi zviri pachena haisi Tiriniti.
JOHANE 1:32 Johane akapupira, akati : Ndakaona Mweya achiburuka kudenga senjiva; akagara pamusoro pake.
Chinhu chakanyanya kukosha. Mweya Mutsvene hauna kupinda muna Jesu. Mweya Mutsvene wakagara paari.
Uku kwaive kuzodzwa, kwete rubapatidzo rweMweya Mutsvene.
Nei paive nekusukwa, kuchizouya kuzodzwa?
Munhu Jesu aive Gwaiana raMwari. Gwayana rechibairo raifanira kusukwa zvichibva paMurairo waMosesi.
II MAKORONIKE 4:6 Akaitawo midziyo yokusukira inegumi, akaisa mishanu kurudyi nemishanu kuruboshwe; yokusukira’mo: zvinhu zvezvipiriso, zvaipiswa, zvaisukirwa’mo; ...
Mudziyo uyu waive wakaita kunge mbiya yaive pachigadziko. Waishandiswa kusukiramo zvipiriso.
Jahane Mubapatidzi paakabapatidza Jesu aisuka Gwaiana rechibairo.
Asi Jesu ndiyewo zvakare Muprista Mukuru.
Tarirai kuti muprista mukuru wekutanga, Aroni, akagadzirirwa sei kuti abate basa pahushumiri hwake nemuprofita Mosesi.
Eksodo 40:12 Zvino uswededze Aroni nevanakomana vake kumukova wetente rokusongana, ugovashambidza nemvura.
13 Ipapo ufukidze Aroni nguvo tsvene, ugomuzodza nekumutsaura, kuti andishumire pabasa rovuprista.
Muprista mukuru aifanira kusukwa uye kuzodzwa nemafuta.
Muprofita Johane aikwanisa chete kusuka Muprista Mukuru Jesu. Mumashure maizvozvo aizomira oona kuzodza kweMweya Mutsvene kuchiburukira kuzogara pamusoro pake. Mafuta mucherechedzo weMweya Mutsvene.
MABASA 10:38 RaJesu weNazareta: Kuti Mwari wakamuzodza noMweya Mutsvene nesimba; iye waipote nenyika, achiita zvakanaka, achiporesa vose vakamanikidzwa naDiaborosi; nokuti Mwari waiva naye.
Hapana pakataurwa neBhaibheri kuti Jesu akabapatidzwa neMweya Mutsvene.
Hapana pakataurwa neBhaibheri kuti Mweya Mutsvene wakapinda maari paaive akamira mumahombekombe merwizi Jorodani.
JOHANE 1:33 Neni ndakanga ndisingamuzivi: asi wakandituma kubapatidza nemvura, ndiye wakati kwandiri: Uyo waunovona Mweya achiburuka pamusoro pake, akagara pamusoro pake, ndiye unobapatidza noMweya Mutsvene.
Uku kwaive kuzodzwa kweMuprista Mukuru mumashure mekusukwa kwake naJohane Mubapatidzi.
Saka Jesu haashanduki.
Kana kuzara kweMweya Mutsvene kwakapinda maari, zvaive zisingaiti kuti arege kushanduka.
Izvi zvinoreva kuti kuzara kweMweya Mutsvene kwaive kwagara kuri maari.
JOHANE 3:34 Nokuti wakatumwa naMwari ndiye unotaura mashoko aMwari: nokuti haapi Mweya achiyera.
VAKOROSE 1:19 Nokuti baba vakafara nazvo; kuti kuzara kwose kugare maari.
JOHANE 3:35 Baba vanoda Mwanakomana vakamupa zvose muruvoko rwake.
Baba ndiwo Mweya waMwari unoshamisa, nekuti Mwari ndiMweya (Johane 4 :24)
Asi Mwari anewo hunhu hwemunhu, nekuti munhu akaitwa nemufananidzo waMwari.
Saka Mwari anoshamisa aida kurarama muMuviri wemunhu sezvo munhu ari ndiye chisikwa chake chaakada kwazvo. Asi munhu mumwechete aikwanisa kugarwa maari naMwari achizviratidza ari maari, aive Munhu Jesu.
I PETRO 1:10 Ruponeso urwu rwakabvunzisiswa nokunzverwa kwazvo navaprofita, vakaprofita zvenyasha dzamaizoitirwa ini.
11 Vachinzvera kuti nguva ndeipi, kana yakadini, yakataurwa noMweya waKristu wakanga uri mukati mavo, nguva yaakapupura kare zvokutambudzika kwaKristu, nokubwinya kunozotevera izvozvo.
Muprofita ega ega aive nechikamu cheMweya waMwari waimugonesa kuratidza humwe hunhu hwehushumiri hwaKristu. Mosesi, Davidi, naJosefa vaive nehupenyu hwaifanoratidzira kuzvarwa kwaJesu, kuzodzwa kwake saMambo nerufu rwake nezvimwe zvakawanda.
Vanakomana vaduku vechiJuda vose vakauraiwa naFarao pakaberekwa Mosesi. Herode akapa murairo wekuti vanakomana vaduku vose vechiJuda vauraiwe paakanzwa kuti Jesu aive azvarwa.
Davidi akazodzwa kuita mambo ari mwanakomana waJesse muduku asi aizomirira kuti muvengi Sauro afe asati agadzwa kuva mambo. Jesu akazodzwa kuva Mambo meMweya Mutsvene wakaburukira paari senjiva, asi aifanira kumirira kusvikira muvengi wake mukuru, muchinda waantikristu anouya nenguva yeKutambudzika kukuru, aparadzwa paAmagedhoni. Ipapo Jesu ndipo paanozotora hushe pamusoro penyika saMambo munguva yerugare.
Josefa akavengwa nevakoma vake akatongerwa nhema akagara mutorongo nevatadzi vaviri. Mubiki wechingwa akafa mudiri wewaini akararama. Jesu akavengwa nehama dzake maJuda vakamunyepera akatongerwa kuti afe pamwechete nembavha mbiri paCalvari. Mumwechete akamugamuchira akawana hupenyu husingagumi. Mumwe akafa akaenda kugehena.
Saka muTestamente Yekare, Mwari aikwanisa kurarama chikamu cheHupenyu hwake mumuprofita mumwe nemumwe.
Asi Mwari aida kurarama muMuviri wemunhu maaizorarama kuzara kwehumunhu hwake.
Ezekieri akaona chiratidzo chaMwari akazvisikira Muviri weMweya kuti avonekwe nevatumwa Kudenga. Muviri uyu waive wakangoita semunhu.
EZEKIERI 1:26 Kumusoro kwedenga rakanga riri pamusoro pemisoro yazvo, kwakanga kunechinhu chakafanana nechigaro chovushe, chakaita sebwe resafuri; pachinhu chakafanana nechigaro chovushe kwakanga kunomufananidzo womunhu ugere pamusoro pacho.
Mweya usingaonekwe waMwari Baba waiedza kuratidza humunhu hwawo kupfurikidza kurarama muMuviri weMweya wakaita kunge munhu unodaidzwa kuti Theophany (wakatsanangurwa seMwanakomana waMwari) , waionekwa nevanhu vemweya vakaita sevatumwa Kudenga.
Saka Mwanakomana ndiwo Muviri unogarwa nemweya unoshamisa waBaba.
Saka kuzara kwovuMwari kwakagara sei muMuviri wemunhu Jesu?
Paive nechiprofita chikuru chekutsanangura kuti kuzvarwa kwaJesu kwaive pamusoro pei.
ISAYA 7:14 Naizvozvo Ishe amene uchakupai chiratidzo; tarirai mhandara ichava nemimba, ichabereka Mwanakomana, ndokumudaidza Imanuere.
Imanuere zvinoreva kuti Mwari unesu.
MATEO 1:23 Tarira mhandara ichava nemimba, ichazvara Mwanakomana, vachamutumidza zita rinonzi Emanuere; ndokuti kana zvichishandurwa; Mwari unesu.
ISAYA 9:6 Nokuti takazvarirwa Mwana takapiwa Mwanakomana; vumambo vuchava papfudzi rake; zita rake richanzi: Unoshamisa; Gota, Mwari unesimba, Baba vokusingaperi, Muchinda worugare.
Jesu semunhu aidaidzwa kuti Mwanakomana waMwari kubva pakuberekwa kwake kusvika pakufa kwake.
Pano zviri pachena kuti Mwanakomana akazvarwa aive Mwari wemasimba ose naBaba vokusingaperi.
Vachenjeri vakaona izvi ndicho chikonzero nei vakamunamata saMwari.
Kana musingaoni Mwana Jesu saMwari wemasimba naBaba vokusingaperi, munenge musina kuchenjera.
Mweya waMwari Baba ungava sei zvese maari uye uchiburukira kunogara paari senjiva seruzodzo?
Fungai nezvaEria achitorwa kukwira kudenga. Nguvo yake yakawira pasi ikanhongwa naErisha. Nguvo ijira rinofukidzwa pamapfudzi. Rinogara pamapfudzi emunhu. Mucherechedzo wekuzodza kweMweya unogara patiri kuti utigonese kuita zvimwe zvinhu.
Eria aive mupenyu zvinoreva kuti Mweya wake waive uchiri maari. Asi Mweya wake waivewo munguvo yake yakawira kuna Erisha kuti imuzodze. Mweya waEria waive wakamurirwa munguvo yake.
Ruvara rutsvuku ruri pamufananidzo runomiririra Mweya waEria.
II MADZIMAMBO 2:11 Zvino vakati vachifamba, vachingotaurirana zvavo, ngoro yomoto namabhiza omoto zvikasvika, zvikavaparadzanisa ivo vaviri, Eria akakwira kudenga nechinyamupupuri.
13 He took up also the mantle of Elijah that fell from him, and went back, and stood by the bank of Jordan; akanonga jazi raEriarakanga rawa kwaari, akadzoka akamira pamhenderekedzo dzaJorodani.
II MADZIMAMBO 2:15 Zvino vanakomana vemaprofita vakanga vari paJeriko pakatarisana naye, vakati vachimuvona,vakati mweya waEria wogara pamusoro paErisha; vakandosongana naye vakakotamira pasi pamberi pake.
Mweya waEria hauna kupinda muna Erisha, wakagara pamusoro pake. Izvi zvakapa Erisha migove miviri yemweya.
II MADZIMAMBO 2:9 Zvino vakati vayambuka, Eria akati kuna Erisha; Kumbira chandingakuitira, ndichigere kubviswa kwauri, Erisha akati; Ndiperi migove miviri yomweya wenyu.
Rangarirai Sauro wekuTarsusi munzira yeke yekuenda Damasiko.
Akaona chiedza chakajeka chaive Mweya waMwari. Chiedza chakamuudza kuti chaive Jesu. Asi Jesu aifanira kugara mumuviri wake wechipiriso pachigaro chehushe kusvikira mweya wekupedzisira wauya kwaari.
MABASA 3:20 Atume Kristu iye Jesu, wakagadzwa kare nokuda kwenyu
21 Iye unofanira kugamuchirwa kudenga kusvikira nguva yokugadzirwa kwezvinhu zvose, yakarebwa naMwari nemuromo wavaprofita vake vatsvene kubva pakutanga.
“Kugadzirwa’ zvinoreva “kudzoserwa”.
MATEO 17:11 Akapindura (Jesu) akati; Eria uchavuya hake, avandudze zvinhu zvose.
Jesu haangadzoki kusvikira Eria (chiGiriki chaErija) avandudza zvinhu zvose zvadzokera pazvaive mukereke yeTestamente Itsva yemadzibaba mapostora.
Kusvika ipapo Jesu haangadzoki, acharamba ari pachigaro chetsitsi kudenga.
VAHEBERU 7:25 Naizvozvo une simba rokuponesa kwazvo-kwazvo avo vanoswedera kuna Mwari naye, zvaanorarama nokusingaperi kuti avareverere.
Haarege kutireverera. Saka haazobvi pachigaro chetsitsi. Asi achigona kugovera Mweya wake kuti uburukire kwatiri paNyika. Chimiro chitsvuku chinomiririra Mweya waMwari unoshamisa.
Saka akagara pachigaro chetsitsi, Jesu anogona kutipa Mweya wake uchiuya sechiedza chinobwinya chinokwanisa kutaura naSauro.
MABASA 9:3 Zvino wakati ari parwendo, oswedera pedyo neDamasiko, kamwe kamwe chiedza chakabva kudenga chikamupenyera kumativi ose.
4 Akawira pasi, akanzwa inzwi richiti kwaari: Sauro, Sauro, unonditambudzireiko?
5 Iye akati: Ndimi aniko Ishe? Akati: Ndini Jesu waunotambudza; zvinokuremera kupfura zvibayiso.
Pauro akadaidza Chiedza kuti “Ishe”.
MuJuda aizodaidza Jehova ega kuti Mwari “Ishe”.
Saka Pauro akaziva kuti Jesu wekuTestamente Itsva ndiye mumwechete ane zita remunhu asi ari Jehova wekuTestamente Yekare. Ndicho chikonzero nei zita rekuti Jehova risina kubvira razotaurwa muTestamente Itsva.
Mweya waMwari unoita hunhu hwakafanana nehwechivhiti-vhiti. Mutauri anorarama ari muimba yekutepfenyura anoonekwa pazvivhiti-vhiti zvese. Asi hamugoni kubata mufananidzo wepachivhiti-vhiti (munokwanisa chete kubata chiso chechivhiti-vhiti).
Saka zvisinei nekufanana kwakaita mifananidzo yese inoonekwa, pangori nemunhu mumwechete chete ari kutaura.
Mifananidzo inoonekwa pachivhiti-vhiti havasi vanhu vakasiyana.
Kwaive naJesu umwechete pachigaro chetsitsi asi anogovera Mweya wake unoshamisa (semifananidzo yepachivhiti-vhiti asi hamuzodi chivhiti-vhiti kana chiso chacho) kuna Sauro.
Jesu anoita zvimwechete izvi nhasi paanogovera Mweya wake mumoyo yemaKristu akazvarwa patsva, avo moyo yavo yakatendeuka inomira “sezviso zvezvivhiti-vhiti” vanozoratidzira Mweya waKristu mukutaura kwavo nehunhu hwavo.
VAEFESO 3:17 Kuti Kristu agare pamoyo yenyu nokutenda;
Moyo mumwe nemumwe unomiririra muKristu akazadzwa neMweya.
Kristu anopindira muhupenyu hwemunhu mumwe nemumwe akazvimiririra.
Jesu akagara pachigaro chetsitsi kuti atireverere uye atipe Mweya wake uburuke kwatiri kuti Mweya uyu urarame matiri, pachinzvimbo chedu.
VAROMA 8:26 Saizvozvo Mweya unobatirana vo nokusava nesimba kwedu; nokuti hatizivi kunyengetera zvakafanira; asi Mweya amene anotinyengeterera nokugomera kusingataurwi;
Danieri akaita chiprofita chakanangana naMessiasi Muchinda, Jesu Kristu.
Zvakare, chiprofita ichi chinoreva Jesu seMuchinda.
Muchinda Mwanakomana waMambo.
Mwari ndiye Mambo wezvinhu zvese. Jesu paakazvarwa aive muchinda muduku aikura.
Asi kwaive nechiprofita chakakosha chaida kuzadziswa.
DANIERE 9:25 Naizvozvo chiziva unzwisise, kuti kubva pakutemwa kwomurairo, wokuvandudza nokuvaka Jerusarema, kusvikira kunowakazodzwa, iye muchinda, zvichaita vhiki nomwe uye vhiki dzinamakumi matamhatu nembiri dzichavako dzekuvakwa kwaro.
Messiasi ndiro shoko rechiHeberu rinoreva kuti “wakazodzwa”.
Saka Muchinda aifanira kuva akazodzwa.
Izvi ndizvo zvakaitika pamahombekombe erwizi Jorodani apo Mudzimu unoyera wakauya seNjiva ukaita senguvo yaEria yakazodzwa ukagara pamusoro paJesu. Ipapo ndipo pakabva patanga hushumiri hwake zvakazara.
Makore matatu nehafu akatevera akatasva mbongoro achipinda muJerusarema, musi weSvondo, saMambo wemaJuda. Uku kwaive kuswedera kwekupera kwehushumiri hwake panyika. Akarovererwa musi weChishanu chakatevera.
ZEKARIA 9:9 Fara kwazvo iwe mukunda waZaoni; pururudza iwe mukunda weJerusarema; tarira Mambo wako unouya kwauri; Ndiye wakarurama, ndiye unokunda; unozvininipisa, akatasva mbongoro, iyo mhuru mwana wembongoro.
Tarirai hunhu hwake paakapinda saMambo. Aive asisiri Muchinda.
Asi pachinzvimbo chekumugadza maJuda akamuroverera pamuchinjikwa.
Jesu paakazvarwa vatumwa vakazivisa vafudzi.
RUKA 2:11 Nokuti nhasi mazvarirwa muguta raDavidi Muponesi, ndiye Kristu Ishe.
Pane mazwi makuru matatu: Muponesi, Kristu Ishe.
“Kristu” zvinoreva kuti “Wakazodzwa”. Saka kubva pakuzvarwa kwake aive akazodzwa, asi uku kwaive kusiri kuzodzwa paruzhinji sezvaizoitika paaizobapatidzwa naJohane.
ISAYA 45:15 Zvirokwazvo muri Mwari unovanda, Imi Mwari waIsraeri, Muponesi.
Mweya waMwari unoshamisa waive wakavanzwa muMwana muduku.
HOSEA 13:4 Kunyange zvakadaro ndini Jehova Mwari wako kubva panyika yeEgipita; hamuzivi umwe Mwari asi ini, hakunoumwe muponesi kunze kwangu.
VAEFESO 4:5 Ishe mumwe, nokutenda kumwe, norubapatidzo rumwe.
VAFIRIPI 2:11 Kuti ndimi dzose dzibvume dziti: Jesu Kristu ndiyeShe, kuti Mwari, Baba arumbidzwe.
Kuna Ishe mumwechete. Ndiye Muponesi mumwechete. Hakuna mukana wekuti paite vanhu vaviri pachikamu ichi.
II VAKORINTE 3:17 Ishe ndiMweya:
Saka Jesu akazvarwa ari Ishe. Ishe ndiye Mweya unozodza.
Mwari ndiye ega Muponesi. Saka kana Jesu akazvarwa ari “Kristu”, “Muponesi”, saka Mwana uyu aive Mwari. Nyama neropa reMwana Jesu zvaive zvisiri Mwari, nekuti Mwari ndiMweya (Johane 4:24).
Mwari aive Mweya unoshamisa waive mukati meMwana Jesu aitariswa naMaria.
Chimiro chitsvuku chiri muMwana chinomiririra Mweya waMwari.
Mwari aive muMwana aive nemakore maviri Jesu akanamatwa nevazivi vekumabvazuva. Munonamata Mwari chete. Vazivi vekumabvazuva vaisazonamata munhu asiri Mwari. Vanhu ava vaive vakachenjera nekuti vaitsvaga Kristu. Ruzivo rwedu harubvi pamadhigiri edu emayunivhesiti, ruzivo rwedu runobva pakukura kwekutsvaga kwatinoita Jesu.
Chimiro chitsvuku chiri muMwana muduku chinomiririra Mweya waMwari.
MATEO 2:11 Vakapinda mumba, vakawana Mwana naMaria mai vake; vakawira pasi vakamunamata, vakasunungura fuma yavo; vakamupa zvipo zvendarama, nezvinonhuwira, nemura.
Zvipo zvavo zvakaudza Jesu kuti vaifungira kuti aive ani.
Ndarama inomiririra Mwari.
Zvinonhuwira zvikakandwa mumoto zvinopa munhuwi wakanaka. Zvibairo, zvikapiswa, zvinoburitsa mweya wakaipa wenyama inotsva. Zvinonhuwira zvaiiswapo kuti zvifukidzire mweya wakaipa nekuushandura kuita munhuwi wakanaka.
Izvi zvaiita chibairo chipo chinotambirika.
Mura yaishandiswa kudzinga mweya wakaipa pazvitunha.
Saka vazivi vaitaura kuti Jesu aive Mwari muMuviri. Aiuya panyika kuti aite basa rinotambirika kurudzi rwevanhu rwose. Aizofira zvivi zvedu.
Johane Mubapatidzi akaisa muenzaniso. Akanongedzerera vadzidzi vake kuna Jesu vakatevera Jesu.
JOHANE 1:35 Ava mangwana zve Johane aive amire, navadzidzi vake vaviri;
36 Akatarisa Jesu achifamba, akati: Tarirai Gwaiana raMwari!
37 Ivo vadzidzi vaviri, vakamunzwa achitaura, vakatevera Jesu.
Gwaiana (Munhu wenyama) anotevera hutungamiri hweNjiva (Mwari anoshamisa)
Tinofanira kutevera Gwaiana, nekuti Jesu semunhu ndiye ega nzira inoshandiswa naMwari asingaonekwe kuti azviratidze kwatiri.
I SAMUERI 15:22 ……… Nokuti, kuterera kunokunda chibairo.
JOHANE 14:15 Kana uchindida, chengeta mirairo yangu.
Muviri waAdamu wakaitwa neruvoko rweguruva. Asi akaunza chivi chakavodza nyika yese.
Mvura yaNoa yakasuka nyika kuti iichenese. Njiva yakauya neshizha remuorivhi (mafuta emuorivhi mucherechedzo weMweya Mutsvene) senhau dzekutanga kuna Noa muareka yake kuti Nyika, yaive yasukwa yanatswa kuzvivi, yaive yabuda kubva mumvura.
Zvino njiva shiri chaiyo yakabva yabhururuka ichienda sezvo rudzi rwevanhu rwaizosvibisa zvakare Nyika yaive yambosukwa yacheneswa. Moyo wemunhu wakaoma hugaro hwezvakaipa nezvivi.
Makore 2 000 akazotevera Njiva yemweya, Mweya Mutsvene, yakabhururuka ichidzoka pana Jesu aive achangobuda mumvura. Njiva yakagara paari, haina kupinda maari. Njiva iyi yakaramba iri paari haina kubhururuka ichienda. Muviri wake waive ruvoko rwekutanga rweNyika yakarurama yaisazoita chivi. Ropa rake raizosuka zvivi zvakanakisa kubva kuvanhu vakatendeuka. Iyi yaive nhanho yekutanga pakuberekwa kweNyika ine vatendi vakazvarwa patsva vanozomutswa kubva kuvakafa nemiviri yakafuka kusavora. Saka pakupedzisira, totenda Munhu akarurama nemuenzaniso waakaisa kuti titevedzere, rimwe zuva tichave vasina zvivi vakarurama.
Ko chakavanzika chekubudirira kwake?
Mweya wemunhu weGwaiana waiteerera nguva dzese kuhutungamiriri hweNjiva yemweya unoshamisa. Munhu uye mweya umoshamisa zvinosangana pakubata kunoita semunana asi mweya unoshamisa unofanira kuva uri ndiwo unotonga.
Mwanakomana wemunhu haana chaakaita kunze kwekunge aratidzwa naBaba vanoshamisa.
JOHANE 5:19 Zvino Jesu akapindura akati kwavari: Zvirokwazvo, zvirokwazvo, Mwanakomana haagoni kuita chinhu asingavoni Baba vachichiita: nokuti zvose zvavanoita ivo, Mwanakomana unozviita saizvozvo vo.
Izvi ndizvo zvaive zviri Jesu paakakura. Pamusoro pazvose, paive pasina umwe munhu aigona kumudzidzisa.
ISAYA 11:2 Mweya waJehova uchagara pamusoro pake, mweya wenjere nowokungwara, mweya wamano nesimba, mweya wekuziva nokutya Jehova.
Jesu aive nehunhu uhu hwese paaikura.
RUKA 2:40 Mwana akakura akasimba, akazara nenjere nenyasha dzaMwari dzikazara pamusoro pake.
Pazera remakore gumi nemaviri Jesu aive akutotaura nemaJuda akadzidza aive muTembere.
Mufananidzo mutsvuku unomiririra Mweya waMwari mumukomana wechidiki Jesu.
RUKA 2:46 Mazuva matatu akati apfuura, vakamuwana ari mutembere, agere pakati pavadzidzisi achiterera nokuvabvunza.
47 Vose vakanga vachimunzwa vakashamiswa nokuziva kwake uye nekupindura kwake.
Einstein akataura kuti kubvunza mibvunzo yakanaka ndiyo kiyi yeruzivo. Jesu aive nezvese mibvunzo nemhinduro kuratidza ruzivo rwake runoshamisa.
Mhinduro dzake dzakaratidza simba rake rekuti aizogona kuvaraira, nekuti tinoenda kunorairwa chete kana tichida mhinduro kune zvinenge zvichitiremera. Sevapi vemazano vemazuva ano, anotanga kuteerera ozobvunza mibvunzo isina maturo inoburitsa pachena kusaziva kwavo. Akabva apa mhinduro dzinodakadza dzakavabatsira kuti vanzwisise. Nyanzvi dzakashamiswa nekunzwisisa kwake pamusoro penyaya dzavaitaura uye kunzwisisa kwake kuva mupi wemazano anokwanisa kubatsira kuti vanzwisise.
“Wemasimba” zvinoreva kuti ane simba guru. Jesu achiri muduku akaratidza kuti aive neruzivo rukuru rweShoko raMwari. Simba repamusoro-soro rekunzwisisa Magwaro nekuzarura zvirevo zvawo zvakadzama. Aivewo nesimba rehunhu hwekugona kumira ega. Aive iye ega achipikisana nechikwata chenyanzvi uye vakakundikana kumisidzana nesimba guru rezvaaitaura.
Nyanzvi dzechiJuda dzese idzi dzakabva dzatarisa Maria aive auya kuzomutsvaga. Nekuziva kuti vaive vasingazotendi mukuberekwa kwake nemhandara, nekusagona kumira pakupikisa kwavo kunotyisa kutaura uku, Maria (sezvatinoita isu tese vanhu kana takatarisana nenyaya inotyisa) akadzokera shure akaita chakarasika, akapa mhinduro yekuti Josefa ndiye aive baba vaJesu.
Ipapo simba rake rinoshamisa rekuzvipira kuchokwadi rakamugonesa, semukomana wechidiki wemakore gumi nemaviri, akamira zvakasimba pamberi pavo vese, kusanganisira Maria maJosefa, paaigadzirisa Maria zvine hunyoro nemaitiro anoitwa negota rinoziva basa raro.
RUKA 2:48 Zvino vakati vamuvona vakakatyamara; mai vake vakati kwaari: Mwana watiitireiko zvakadai? Tarira, baba vako neni takakutsvaka tichichema.
49 Akati kwavari makanga muchinditsvakireiko? Makanga musingazivi kuti ndinofanira kuva pazvinhu zvababa vangu here?
Kutya kwake Mwari kwakaita kuti agadzirise Maria, apo zvichibva pakutya vatungamiriri vechitendero vechiJuda, akaramba kuti aive amubereka ari mhandara. Jesu haana kuda kutsvaga mbiri muvanhu.
Hugota nehukuru zvaive zvakabatana muMwana uyu.
Baba vake vaive Mwari saka aive muTembere yaMwari.
Dai Josefa aive baba vake angadai aive muimba yake yekuvezera achiveza.
Aive awana kudzidza kwese uku kubva kupi?
JOHANE 8:28 Naizvozvo Jesu akati: Kana masimudza Mwanakomana womunhu, ipapo muchaziva kuti ndini iye, uye kuti ini handiiti chinhu ndimene, asi ndinoreva izvozvo zvandakadzidziswa naBaba.
Vakuru vechiJuda vaive vasina ruzivo serwaaive narwo. Vaisagona kumudzidzisa. Saka aizova Mwari anoshamisa aive mukati make aidzidzisa njere dzake dzemunhu paaikura.
Jesu neimwe nzira muMweya wake, zvemunana, aive akabatana zvese munhu (sekuberekwa kwaakaitwa) uye mweya unoshamisa.
Aiziva kuti miganhu yake yaive mukufunga kwake semunhu kana semaberekerwo ake (achidaidzwa Mwanakomana).
Akaona kuti simba rake hwaive hutungamiri hwaaiwana kubva mukufunga kwake kunoshamisa (kunodaidza kuti Baba).
Saka aigaroshingirira kuita kuti ndangariro dzake dzemunhu (Gwaiana) dzizviwisire zvakazara kumazano emweya unoshamisa uye gadziriso dzawo (Njiva inoshamisa). Izvi aizviita nesarudzo nemukuda kwake kwemunhu.
Mwari kana achitonga munhu, anofambisa munhu iyeye munzira yaakatarirwa mukuda kwaMwari.
Asi vanhu ava, zvichibva pakuda kwavo, vanofanira kutendera Mwari kuvatonga hupenyu hwavo uye ndangariro dzavo.
Pakaburuka Mweya kuzozodza Jesu paruzhinji, zvakangoratidza kuti Mweya unoshamisa waive maari waive wakutonga zvakazara hunhu hwake.
Mweya waMwari unokwanisa kuratidzwa munzvimbo zhinji nguva imwechete.
Jesu agere pachigaro chetsitsi kuti atireverere, asi achiri kugovera mweya wake kuti uuye panyika kuti vatendi varipo vazadzwe neMweya.
Kuona Mweya wake munzvimbo dzinodarika imwechete hakuuiti kuti uve Mweya wakadarika Mweya mumwechete.
RUTE 2:1 Zvino Naomi wakanga ane hama yomurume wake, murume wakanga ane simba nepfuma, weimba yaErimereki; wainzi Boazi.
RUTE 2:20 Naomi wakati kwaari: Murume uyu ihama yedu yomumba, mumwe wavadzikinuri vedu.
RUTE 4:7 Zvino iyi ndiyo tsika yakanga iripo kare pakati pavaIsraeri kana vachidzikinura nokutsinhanha; kuti zvese zvisimbiswe; munhu waibvisa shangu yake, ndokuipa hama yake, ndiwo waiva mutovo wokupupura nawo pavaIsraeri.
Kuva hama mudzikinuri munhu aifanira kubvisa shangu yake oipa hama yake.
Jesu akabvisa kubwinya kwake kwese kumusoro kudenga akauya paNyika kuti atambudzike seMunhu wemarwadzo.
Akabva atipa hupenyu hwake.
Aizorarama hupenyu hwake hwese semunhu kuti aonekwe zvakazara semumwe wedu.
Aive mudzikinuri, kwete mutorwa. Aive Munhu kunze asi aive Mwari mukati make.
Akatipa Hupenyu hwake pakabuda Mudzimu unoyera muMuviri wake.
Akabva apa Mweya Mutsvene kunhengo dzekereke yake mukati memakore 2 000 enhorondo yekereke. Tsoka dzemufananidzo waDaniere wemuHedeni dzaimiririra nguva nomwe dzemakereke. Makumbo edare aimiririra Roma yechipegani yakazopinda mukereke yeRoman Catholic ikaipisa dzidziso yeBhaibheri sezvidimbo zviduku zvedare zviri mutsoka. Ivhu ndiro rega rinokwanisa kupa hupenyu pamufananidzo wakaipa uyu. Rinomiririra kereke yechokwadi inotsvaga kutevera Magwaro.
Kubvisa shangu kunoratidza tsoka. Saka Jesu akafamba asina shangu pakati pezvigadziko zvinomwe zvemwenje zvakaitwa nendarama kuna Zvakazarurwa Chitsauko 1 zvinomiririra kuroverwa kwekereke yechokwadi munguva nomwe dzemakereke.
Tsoka dzevhu nedare dzinomiririra kusawirirana kusingaperi pakati pekekeke inotenda kuBhaibheri uye kereke dzemasangano dzinotongwa nehutungamiriri hwevanhu, kupfuura makore 2 000 enhorondo yenguva nomwe dzemakereke.
Tsoka dzinomiririra nguva yekupedzisira apo vadzvanyiriri gumi vanopa simba ravo kuna Pope wenguva yekupedzisira.
ZVAKAZARURWA 17:12 Nyanga dzine gumi dzawavona , ndiwo madzimambo anegumi, achigere kupiwa vushe, asi achapiwa simba samadzimambo pamwechete nechikara nguva imwe.
Vane simba samadzimambo. Havana kugadzwa kuitwa madzimambo. Asi vadzvanyiriri vane masimba akafanana namadzimambo. Hapana kana hushe humwe hwaiveko makore 2 000 akadarika. Asi vachava nesimba kwenguva duku naPope waantikristu munguva yeKutambudzika kukuru.
ZVAKAZARURWA 17:13 Ivo vane ndangariro imwe, vanopa chikara simba ravo novushe bwavo.
Munguva yeKutambudzika, Pope wekupedzisira achava nesimba rezvechitendero uye munezvemari. Asi madzimambo aya achabatana kumupa simba rawo rezvemauto nehondo. Izvi zvichamuita asingakundike. Vadzvanyiriri ava vachange vari munzvimbo dzakasiyana dzepasi rino saka vachave varipo kurwisa chero nzvimbo pasina kutambisa nguva huru.
Kuuya kwechipiri kwaJesu kuriko kuti kutore vanhu vake kuenda mukubwinya uye nguva imwechete iyi, achaita seDombo rinosvikorova tsoka dzemufananidzo wemuHedeni. Dombo iri rinorova nyika makereke akaitwa munguva dzemakereke anobva aputsanyiwa kuita mafufu achipinda munguva yeKutambudzika.
ChiKrustu hachisi chevakaneta vakaregedzeka. MaKristu echokwadi anosangana nekurambwa nekurovererwa.
VAFIRIPI 2:12 Naizvozvo vadikanwa vangu, sezvamakaterera nguva dzose, ndisati ndiripo bedzi, asi zvikuru zvino kana ndisisipo, pedzisai kuponeswa kwenyu nokutya nokudedera.
Ndicho chikonzero nei Johane Mubapatidzi akati haakwanisi kusunungura rukanda rweshangu dzaJesu kuti aburitse pachena tsoka dzake. Johane aisazogona kutarisana nekurovererwa kwaizotarisana nekereke mumakore 2 00o enhorondo yekereke. Uye Johane aive asina zaruriro yekuziviswa kwenguva nomwe dzemakereke dzaizounzwa nekuratidzwa kwetsoka.
Saka Boazi akadzikinura Naomi (semukadzi aimiririra kereke yemaJuda) akatenga muroora wake Rute kumuita mukadzi wake (zvichimiririra kereke yevaHedeni, sezvo Rute aive asiri muJuda) .
Kuti ave hama Mudzikinuri, Jesu aifanira kuva munhu kunge isu tese.
Saka aifanira kuzvarwa okura kuita murume. Mwari aive pakati pedu kupfurikidza kurarama muMunhu Jesu paaikura.
Mwari aive agara achida muviri unoonekwa kuti agare mauri kuti Mweya wake usingaonekwi, wakaratidzwa muruvara rutsvuku, uonekwe.
EKSODO 14:24 Mangwanani Jehova akatarira hondo yavaEgipita, ari mushongwe yomoto neyegore, akavhundutsa hondo yavaEgipita.
Mwari asingavonekwi, akamiririrwa nechimiro chitsvuku, aive akavanda muGore akatarisa nemugore raive rakamukomberedza kuti aone vaEgipita.
Mwari asingaonekwe akavandawo muShongwe yeMoto.
Mosesi akarova dombo akaburitsapo mvura murenje.
I VAKORINTE 10:4 Vose vakanwa zvokunwa zvimwe zvomweya; nokuti vakanwa padombo romweya rakavatevera; Dombo iro rakanga riri Kristu.
Mwari vasingaonekwe vaive vakavanda muDombo raivatevera richivavigira mvura.
Vabereki vaSamsoni vakaona Mutumwa waMwari.
VATONGI 13:3 Mutumwa waJehova wakazviratidza kumukadzi uyu, akati kwaari; Tarira zvino, iwe haubereki, haunomwana; asi uchava nemimba nokubereka Mwanakomana.
VATONGI 13:20 Nokuti murazvo womoto wakati uchikwira kudenga uchibva paartari, mutumwa waJehova ndokukwira mumurazvo weartari, Manoa nomukadzi wake vakatarisana; vakawira pasi nezviso zvavo.
VATONGI 13:22 Zvino Manoa akati kumukadzi wake: Tichafa zvirokwazvo, nokuti takavona Mwari.
Mwari akazvivanza mumuviri wemweya wemutumwa.
Mwari akazoguma azvivanza muMwana akazokura kuita Mukomana wechidiki. Aizokura kuita murume wemakore makumi matatu.
Mufananidzo wemurazvo wemoto uri muMukomana Jesu ndiwo Mweya waMwari unoshamisa.
Vanakomana vaAroni ndivo vaiita huprista. Pavaisvitsa makore makumi matatu chete ndipo pavaizogona kuita hushumiri hwechiprista.
NUMERI 4:1 Zvino JEHOVA akataura naMosesi naAroni akati:
2 verenga vanakomana vose vaKohati, pakati pavana vaRevi nemhuri dzavo, nedzimba dzamadzibaba avo.
3 Vanamakore anamakumi matatu navanopfuura, kusvikira pamakore makumi mashanu, vose vanopinda pabasa, kuti vaite basa mutente rokusongana.
Saka kana Jesu paakasvika kumakore makumi matatu, akasukwa mumvura akazodzwa neMweya mutsvene. Ipapo aizokwanisa kutanga hushumiri hwake.
RUKA 3:22 Mweya Mutsvene wakaburuka pamusoro pake nomufananidzo wakaita sowenjiva, inzwi rikabva kudenga, richiti: ndiwe Mwanakomana wangu, unodikanwa; ndinokufarira.
23 Zvino Iye Jesu wakanga anamakore anenge makumi matatu.
Mweya Mutsvene wakaita Njiva. Mweya Mutsvene waiva muna Johane Mubapatidzi. Mweya Mutsvene waive Munzvimbo Tsvene muTembere.
Johane Mubapatidzi akagamuchira Mweya Mutsvene paaive achiri mumimba maamai vake.
RUKA 1:13 Mutumwa akati kwaari: usatya Zakaria; nokuti kukumbira kwako kwanzwika, mukadzi wako Erisabeta uchakuberekera mwanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Johane.
RUKA 1:15 Nokuti iye uchava mukuru pamberi paShe; haangatongonwi waini nezvinobata, uchazadzwa noMweya Mutsvene kubva padumbu ramai vake.
Mufananidzo mutsvuku wekutanga unomiririra Mweya Mutsvene mumwana Johane ari mudumbu.
Mufananidzo wechipiri une mufananidzo mutsvuku unomiririra Mweya Mutsvene muma mai vaJohane Erisabeta.
Maria paakangotora mimba yaJesu, akabva akaenda kuna Erisabeta.
RUKA 1:41 Zvino Erisabeta wakati achinzwa kukwazisa kwaMaria, mwana akakwakuka mudumbu rake, ipapo Erisabeta akazadzwa noMweya Mutsvene.
Saka vose Erisabeta naJohane vaive vakazadzwa noMweya Mutsvene panguva iyi.
Mweya Mutsvene waive wauyawo pana Maria.
RUKA 1:35 Mutumwa akapindura akati kwaari: Mweya Mutsvene uchavuya pamusoro pako.
Kana muchiti Mweya mutsvene waive usiri mumwana Jesu ari mudumbu, aive achangotorwa mimba yake, zvino Maria, Erisabeta, naJohane vaive vari vakuru kukunda iye nekuti vose vaive vari neMweya Mutsvene. Izvi hazvigoneke. Hakuna munhu ari pamusoro paJesu.
Johane akagamuchira Mweya Mutsvene paaive nemwedzi mitanhatu ari mudumbu raamai vake. Jesu aifanira kuva Mukuru pamasimba kupinda Johane. Saka kubva pakutorwa kwake pamimba naamai vake, aifanira kugara atori Mweya Mutsvene.
RUKA 1:43 Zvaita seiko kwandiri, kuti ndamutswa namai vaShe wangu?
MaJuda aiziva Ishe mumwechete. Aive Jehova Mwari. Saka Mwari aive agara ari muna Jesu, kubvira paaive achiri mudumbu ramai vake.
Jesu haana kubvira ashanduka kubva pakuva Munhu kuita Mwari.
Aive agara ari, kubva pakubatwa kwemimba yake, mubatanidzwa wakavanzika wemunhu nemweya unoshamisa. Sechiedza mubatanidzwa wakavanzika wemafungu nechinhu chakabatana chinoenda rutivi rumwe.
Kubata kwemimba yaJesu kwaive apo Mweya waMwari wakasika ukazviputira muzai remunhu mudumbu raMaria. Mwari akazvisikira Muviri asina chaakashandisa kubva muna Maria.
VAHEBERU 10:5 ... asi makandigdzirira muviri
Maria aingova mutakuri wemwana Jesu chete.
VAHEBERU 2:16 ... asi unobatsira vana vaAbrahama.
Mbeu hurume hwababa. Mweya waMwari, Hupenyu husingagumi, hwaive hwakaputirwa muMbeu iyoyo yekutanga.
Kwatiri, izvi zvinoita sezvisingagoneki. Asi kuna Mwari, hakuna chisingagoneki.
Hatitorina mazwi akakodzera kuti titsanangure chiitiko ichi. Izvi ndizvo zvakataurwa nemutumwa kuna Maria:
RUKA 1:35 Mweya Mutsvene uchavuya pamusoro pako, nesimba rowokumusoro-soro richakufukidza; saka icho chitsvene chichaberekwa chichanzi: Mwanakomana waMwari.
Saka pakabapatidzwa Jesu, Johane aive akazadzwa neMweya Mutsvene. Uye Johane haagoni kuva mukuru kuna Jesu nechero nzira. Saka Jesu aive neMweya Mutsvene uri maari. Jesu aive nekuzara kweMweya Mutsvene maari. Johane aive nechikamu chemugove weMweya Mutsvene.
Mweya Mutsvene waive muna Johane uye muNjiva. Waive zvakare muTembere.
MARAKI 3:1 Tarira ndinotuma nhume yangu, uchandigadzirira nzira yangu pamberi pangu, ipapo Ishe wamunotsvaka uchasvika pakarepo patembere yake,
“Tembere yake” zvinoreva kuti Mwari aive achiriko apo Jesu (Ishe) akasvika pakarepo kuTembere yake akarasira pasi mari yevaitengesamo.
RUKA 19:46 Achiti kwavari: kwakanyorwa kuchinzi Imba yangu ichava imba yokunyengetera, asi imi makaiita bako remakororo.
Jesu akataura zvakataurwa kuna Isaya.
ISAYA 56:7 Nokuti imba yangu ichanzi imba yokunyengetera yavanhu vose.
Saka Jesu aiburitsa pachena kuti Mwari aive achiri muTembere.
Chimiro chine ruvara rutsvuku chinomiririra Mwari aive muTembere.
Mwari ega ndiye Mutsvene. Saka kana Mwari aive muTembere saka yaive nzvimbo tsvene.
Mwari airarama pakati pemakerubi maviri aive pamusoro peareka, asingaonekwe ari kuseri kwechidzitiro chemukati, munzvimbo tsvene-tsvene.
Mucherechedzo mutsvuku wakaita rimi unomiririra Mwari.
Mwari akabva rini muTembere? Paakabvarurwa chidzitiro paifa Jesu pamuchinjikwa.
MATEO 27:50 Zvino Jesu akadanidzira zve nenzwi guru akarega Mweya wake.
51 Ipapo tarira; chidzitiro cheTembere chakabvaruka napakati, kubva kumusoro kusvika pasi; nyika ikadengenyeka, mabwe akatsemuka.
Saka kana Mwari akabva muTembere pakafa Jesu, saka aive achiri muTembere pakaburuka Njiva pamusoro paJesu.
Saka Mweya Mutsvene waive muma Johane Mubapatidzi. Mweya Mutsvene waive muTembere. Mweya Mutsvene waive muNjiva. Kutaura kuti Mweya Mutsvene waive usiri muna Jesu kunomuita kuti ave muduku pavatatu ava. Izvi hazvisi chokwadi.
Kana Mweya Mutsvene wakaburuka ukapinda muna Jesu, aizoshanduka. Asi haana kubvira ashanduka.
VAHEBERU 13:8 Jesu Kristu unogara wakadaro zuro, nanhasi, nokusingaperi.
Saka Jesu aive nekuzara kweMweya kare Mweya usati waburuka kuzomuzodza paruzhinji semuPrista Mukuru naMambo. Aifanirawo kuzodzwa kuva Muchinda (Messiasi Muchinda) kuzadzisa chiprofita chekuna Danieri Chitsauko 9.
DANIERI 9:25 Naizvozvo chiziva unzwisise, kuti kubva pakutemwa kwomurairo, wokuvandudza nokuvaka Jerusarema, kusvikira kunowakazodzwa, iye muchinda, zvichaita vhiki nomwe uye vhiki dzinamakumi matamhatu nembiri dzichavako dzekuvakwa kwaro.
“Messiasi” ndicho chiHeberu chinoreva kuti “Kristu” zvichirevawo kuti “Wakazodzwa”.
Njiva haisi Munhu. Mweya Mutsvene ndiwo Baba vaJesu nekuti ndiwo wakasika muviri wake wemunhu mudumbu raMaria.
Jesu ndiye Ishe saka ndiye Mweya.
VAFIRIPI 2:11 Kuti ndimi dzese dzibvume dziti, Jesu Kristu ndiyeShe, kuti Mwari, Baba, arumbidzwe.
Kuna Ishe mumwechete.
VAEFESO 4:5 Ishe mumwe,
Saka kwaive neMunhu mumwechete, Jesu Kristu, akaonekwa pamahombekombe erwizi paakazodzwa paruzhinji kuti atange hushumiri hwake.
Mweya Mutsvene wakazviburukira seNjiva, kwete seMunhu, kuti pasave neanoti akaona Vanhu vaviri.
Mwari aive nesu seHama Mudzikinuri. Aive akura kubva pakuva Mwana uye nekuti aive Munhu akafanana nesu aizosiya muenzaniso kwatiri uye kutiratidza kuti munhu angararame sei kana achizvipa zvakazara pakuita kuda kwaMwari.
Hupenyu hwake hwaive hwakatarirwa kuita kuda kwaMwari asi zvichibva pakuda kwake iye semunhu akasarudza kutevera nzira yaaive atarirwa iyoyo.
Mwari akagumisa murairo here paakabvarura chidzitiro chemuTembere?
Kefasi akagumisa murairo nekubvarura nguvo yake.
MATEO 26:65 Ipapo muprista mukuru akabvarura nguvo dzake, akati: Wamhura Mwari!
Nei izvi zvakagumisa Murairo?
EXODUS 28:31 Unofanira kuita jasi reefodi rose remucheka mutema.
32 Ngarive neburi rokupinza musoro pakati paro, rive nomupendero wakarukwa unopoteredza buri raro, sepaburi renguvo yokurwa, kuti irege kubvaruka.
Muprista mukuru aipfeka nguva tema iyi senguvo yake yepamusoro. Yaisafanira kubvaruka.
Kefasi paakaona kuti chinzvimbo chake chesimba semukuru wechitendero nepfuma yaifambidzana nacho, chaive chava panjodzi kupfurikidza kusvika kwaMessiasi, akatsamwa kwazvo negodo, neshungu akabvarura nguvo yaive yakasimbiswa iyi.
Saka muprista mukuru akagumisa murairo nekubvarura nguvo yake kwaakaita.
Mwari akazotsinhira kuita kwakaipa uku nekubvarura chidzitiro cheTembere kubva kumusoro, kusingagoni kusvikirwa nemunhu.
Habhagoni inguvo yekurwa inopfekwa nemuuto kuhondo. Inofanira kusimbiswa kuti isabvaruke zviri nyore.
Izvi ndizvo zvakaita habhagoni nguvo yekurwa nayo. Ndeyekuchengetedza muviri neburi rakasimbiswa rinokwana muhuro yemunhu. Inotoda simba guru kwazvo kuti ibvaruke.